Iityuwa zamanzi zetyuwa zeDummies Cheat Sheet
Ukugcina amanzi anetyuwa akwariyam kuthetha ukugcina ishedyuli yolondolozo olungqongqo ukugcina ubomi ngaphakathi busempilweni. Amanzi akwii-aquariums zamanzi anetyuwa afuna ukuvavanywa rhoqo kweentlobo ngeentlobo zezimbiwa kunye nokulinganiswa kweekhemikhali. Ukufumanisa ishedyuli yokondla efanelekileyo kunye nenani leentlanzi zakho ngumsebenzi ofuna ukuhoywa xa uqala ukugcina i-aquarium yakho naxa abantu betshintsha.
© Vojce / Shutterstock.com
Elona xesha lilungileyo lokuthatha ingcambu ye-maca
Ishedyuli yokuGcina i-Aquarium yakho yetyuwa
Ukugcina iintlanzi kunye nobunye ubomi baselwandle kwi-aquarium yakho yetyuwa eyonwabileyo kwaye isempilweni, kuya kufuneka wenze ulondolozo olusisiseko. Eminye imisebenzi ekufuneka uyenzile yonke imihla ngaphandle kokusilela; eminye imisebenzi uyenza ngeveki, kabini ngeveki, okanye ngenyanga. Kwaye rhoqo kwiinyanga ezintathu kufuneka uqhube uvavanyo olucokisekileyo lwazo zonke iinkqubo ze-aquarium, kubandakanya ukukhanya, ukufudumeza, ukuhluza, isump, iintloko zamandla, iimpompo zomoya, kunye netyhubhu. Guqula okanye ucoce iinxalenye njengoko kufuneka.
Le theyibhile ilandelayo ibonisa imisebenzi ekufuneka yenziwe rhoqo:
Yonke imihla Kanye ngeveki Rhoqo emva kweeveki ezimbini Inyanga qho
Cima izibane. Uninzi lwama-aquarists lukhetha ukusebenzisa ixesha elizenzekelayo. Ukuba ukhetha ukungawenzi, zama ukuvula nokucima izibane kwipateni engqinelanayo. Susa ulwelwe olugqithisileyo, ugcine ulwelwe olunenzuzo kumanqanaba amkelekileyo kunye nokulahla i-algae eyinkathazo. Coca amacebo okucoca ulwelo njengoko kufuneka. Inxalenye yenguqu okanye ususe imithombo yeendaba yeefilitha kwizihluzi ezithile ukuba i-bioload iphezulu, imithombo yeendaba imdaka, okanye ukuhamba kuthintelwe. Yenza uhlolo olucokisekileyo. Faka endaweni yesihluzo sekhabhoni kwaye uhlambe imithombo yeendaba yokuhluza kunye nezinto, njengoko kufuneka kwaye kuxhomekeke kwi-bioload.
Qaphela iintlanzi zakho kunye nama-invertebrates kwiimpawu zoxinzelelo, izifo okanye ukufa. Zilungiselele ukususa okanye ukunyanga iintlanzi ezingaphilanga. Coca iglasi, ngaphakathi nangaphandle; susa iidipozithi ezinetyuwa. Guqula amashumi amabini eepesenti etanki lamanzi ngelixa ucoca igrabile. Coca iprotein skimmer.
Tyisa iintlanzi nezinambuzane ezingenamqolo kabini ngemini, ususe nakuphi na ukutya okungatyiwanga. Ezinye iintlanzi zisenokufuna ukondla rhoqo, ngelixa ezinye zingafuneki kangako. Yenza konke okusemandleni akho ukulungiselela iimfuno zohlobo ngalunye. Yenza lonke uvavanyo lwamanzi ngeveki emva kokuvuthwa kwamanzi kunye nomjikelo wenitrogen; zibandakanya i-alkalinity, i-calcium, kunye ne-phosphate. Rekhoda zonke iziphumo zovavanyo kwaye ungeze umkhondo wezinto kunye neetampers njengoko kufuneka. Guqula ii-airstones njengoko kufuneka.
Yenza uvavanyo lwamanzi ade akhule amanzi kunye nomjikelo wenitrogen. Uvavanyo oluqhelekileyo lubandakanya i-ammonia, i-nitrite, i-nitrate, kunye ne-pH. Rekhoda iziphumo zovavanyo. Coca umphandle we-aquarium, ususe ityuwa kunye ne-calcium deposits, uthuli kunye nokungcola.
Jonga ubushushu bamanzi kunye nomxhuzulane othile okanye ityuwa. Lungisa isifudumezi njengoko kufuneka. Hlanganisa nayiphi na imihlobiso yetanki enesiphatho esingaphezulu kwendalo.
Sula yonke indebe yokuqokelela yeploteni xa kufuneka.
Jonga inqanaba lamanzi kwaye uphume phezulu njengoko kufuneka.
Jonga zonke iinkqubo ze-aquarium: isifudumezi, amacebo okucoca ulwelo, iizikhuseli zomoya, iskimmer skimmer, isump. Qiniseka ukuba ziqhuba ngokufanelekileyo nangokutyibilikayo kwaye zihlawula ingqalelo ekhethekileyo kukungenisa kunye neesiphon imibhobho. Qiniseka ukuba akukho nto iyavuza.
Indlela yokondla iintlanzi kwi-Aquarium yakho yetyuwa
Phuhlisa imeko yokusebenza ukuba ungaphi kwaye kangaphi ukondla iintlanzi kunye nezinambuzane ezingenamqolo kwi-aquarium yakho yetyuwa. Sebenzisa izikhokelo kolu luhlu lulandelayo kwaye ugcine engqondweni ukuba ngokuqinisekileyo kungcono ukubondla kakhulu kunokubaninzi.
Nika ukutya okuninzi njengokutya kweentlanzi zakho kwimizuzu emihlanu. Ukutya akufuneki kutshone ngaphantsi kobude besinye kwisithathu sobungakanani betanki. Nika amacwecwe, iipelethi, okanye ukutya okutshonayo kweentlanzi ezisezantsi kunye nezilwanyana ezingenamqolo.
Yondle ukutya kwakho ngezahlulo ezincinci kakhulu kwisithuba semizuzu emihlanu. Ukuba kukho ukutya okushiyekileyo emva kweli xesha, utyiswa kakhulu.
Okunye ukutya, okunje ngeletisi kunye nesipinatshi, ziyabhalwa ngokuhamba kwexesha, ke umthetho wemizuzu emihlanu awusebenzi.
Ukuba usekhaya emini, yondla iintlanzi zakho kunye nezinambuzane ezingenamqolo zincinci kakhulu ngexesha losuku. Ukuba awukho ekhaya, bondle kabini ngosuku ngamaxesha afanayo yonke imihla, kanye kusasa kanye ngobusuku. Gcina ukhumbule ukuba abanye abagxeki basebusuku, ke kuya kufuneka ubondle emva kokuphuma kwezibane.
Soloko utyisa iintlanzi zakho kwindawo enye etankini. Oku kukuvumela ukuba utyibilike ukutya uye ezantsi kubantu abahlala ezantsi, ngelixa iintlanzi ezingaphezulu ziphazamiseka.
Musa ukoyisa iintlanzi, nokuba ucinga ukuba bafuna ukutya okungakanani na. Ukutya kakhulu uxinzelelo lweentlanzi zakho kwaye kubangele ukuba i-detritus iqokelele etankini, ukuthoba umgangatho wamanzi.
Iikiti zovavanyo lokuvavanya amanzi kwii-Aquariums zamanzi eTyuwa
Awunakho ngokubonakalayo ukumisela ibhalansi ye-pH yamanzi kwi-aquarium yakho yetyuwa. Ukugcina amanqanaba asempilweni eekhemikhali kunye neeminerali kwi-aquarium yamanzi anetyuwa, kuya kufuneka uvavanye amanzi, kwaye ukuze wenze oko, kuya kufuneka uthenge izixhobo zokuvavanya i-aquariums zamanzi anetyuwa. Nasi isikhokelo ngokubanzi sokuthenga iikiti zovavanyo lwentlanzi-yakho kuphela okanye itanki yolwandle. Njengoko itanki yakho iya isiba nzima, unokuhlala ukongeza kwingqokelela yovavanyo lwekhithi.
Ikhithi yovavanyo Itanki Yentlanzi-Kuphela Itanki Yamanzi Oludonga
pH Ewe Ewe
Amoniya Ewe Ewe
Initriti Ewe Ewe
Amanitrate Ewe Ewe
Ubuncwane ukhetho Ewe
I-oksijini enyibilikisiweyo ukhetho ukhetho
Ubhedu ukhetho hayi
Iphosphate ukhetho Ewe
Iodine hayi ukhetho
Ikhalsiyam hayi Ewe
Silica hayi ukhetho
Iikiti zovavanyo zenziwe ukuze kungafuneki ukuba ube yikhemesti ukuze uzisebenzise. Nangona kwenziwe iindlela ezimbalwa, ezona zixhaphakileyo kubandakanya ukongeza amathontsi ekhemikhali yovavanyo kwisampulu ye-aquarium etshintsha umbala wamanzi. Utshatisa i-watercolor kunye naleyo ikwitshathi yombala, ekuxelela inqanaba elichanekileyo loko ukuvavanyayo.
tv 150 iipilisi eziphakamileyo
hard drive kunye windows 10
yintoni ibhalsamu yebhalsam
excedrin kwisisu esingenanto